Fambolen-kazo Alaotra: « Ampandraiso andraikitra ny fokontany » | NewsMada
Fambolen-kazo Alaotra: « Ampandraiso andraikitra ny fokontany »
Par Taratra sur 21/01/2020
Marobe ireo fanohoan-kevitra mikasika ity fanirian’ny Malagasy hiverenan’i Madagasikara ho « Nosy maitso” ity. Misy mahita fa haingana loatra ny fametrahana fanamby satria « … tsy mbola misy vola ampy hanatanterahana ilay fanamby akory, hono, vonona!”. Fa ao koa ny manitrikitrika fa « raha tsy atao io tsy vita: aleo hatrehina!”.Ny filoham-pokontany iray ao Ambatondrazaka kosa, tsy any amin’izay ny resany. Mahita izy fa « fitantanana raharaham-panjakana hatrany sy fotsiny ny azy ireo hatramin’izay no ampiasana ny fokontany. Tsy ampandraisina anjara loatra amin’ny sehatra fampandrosoana”.
Anjaran’izay manana andraikitra mifanandrify amin’ireo ny mandinika. Amin’ny maso tsy miangatra no ilazana fa manao ezaka be tokoa ireo rafi-paritry ny minisiteran’ny Tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra. Ho an’Alaotra Mangoro fotsiny, bolongan-tany (boulettes) miisa 600 000 ao amin’ny distrikan’Ambatondrazaka sy Amparafaravola, 50 000 any Andilamena ary 2 300 000 misy voan-kininina, rofia, tavolo, voapoaka ary indrindra, voandelaka no efa vonona, miandry izay handray andraikitra hamboly sy hikolokolo azy.
Ohatra ny hazo tsy manao ahoana loatra ny voandelaka. Rehefa dinihina, io voandelaka io no tokony hovolena marobe hanampy ny kininina satria tsy mifidy tany na toetr’andro izy io. Tapahina dia maniry avy hatrany indray, azo atao kitay… Raha ny olan’ny kitay fandrehitra fotsiny mantsy no voavaha, efa afaka midera tena ny Gasy. Koa nahoana raha homena adidy hanely ireo “boulettes” sy hanara-maso ny fikokojana ny zana-kazo homen’ireo ny fokontany? Dia mbola hasiana adihevitra politika indray koa ve?
Banky Iraisam-pirenena: «Namono antoka ny Jirama ny fitazonana ny vidin-jiro» 03/03/2021
Tsara vidy ny vary: maro ny mamoaka Sprinter any Alaotra 03/03/2021
Fambolena: ampiasana finday ny tetiandrom- pambolena 03/03/2021
Tolo-kevitry ny CJD: « Alohan’ny 3 mey ny fifidianana » 03/03/2021
Faha-130 taonan’i Ny Avana Ramanantoanina: natsidika tao anaty fankalazan’ny Havatsa Upem ny Tenin-drazana 03/03/2021